भारत पाकिस्तान विभाजनमा छुट्टिएका दाजुभाइको ७५ वर्षपछि यसरी भयाे पुर्नमिलन
17th January, 2022 Mon ०८:१८:५८ मा प्रकाशित
मोहम्मद सिद्दिक (बाँया)ले लगभग ७५ वर्षपछि आफ्नो कान्छो भाइ मोहम्मद हबीबलाई भेटेपछि ।
काठमाडाैं । ‘तिमी पाकिस्तान आउ, म तिम्रो बिहे गर्छु।’
स्वतन्त्रतापछि पहिलो पटक भेटेका दुई दाजुभाइबीचको कुराकानीको यो अंश हो ।
मोहम्मद सिद्दिक र मोहम्मद हबिबको यो अनौठो भेट लाखौं मानिसहरूको आँखामा बरसिरहेको सपना हो जसका लागि स्वतन्त्रताको विभाजन एउटा कथा मात्र होइन।
विभाजनको समयमा यी दुई भाइहरू अलग भएका थिए, जब उनीहरूको परिवार अशान्तिमा जालन्धरबाट पाकिस्तान गएको थियो। उनको बुबाको मृत्यु भयो। सिद्दिक आफ्नी बहिनीसँग पाकिस्तान पुगेका थिए । हबीब यहाँ आफ्नी आमासँग बसे। पछि आमाको मृत्यु भयो ।
यो सबै कसरी भयो उनलाई अझै याद छैन। तर करिब ७५ वर्षपछि दुवै दाजुभाइको भेट करतारपुर करिडोरबाट भएको थियो । यो विभाजनबाट सुरु भएका अनगिन्ती कथाहरू मध्ये एक हो।
‘म इमरान खानलाई मेरो भाइ मोहम्मद हबीबलाई पाकिस्तानको भिसा दिन आग्रह गर्दछु, अलग भएका दाजुभाइहरूलाई पुनर्मिलन गर्न। यदि हामीले जीवनको अन्तिम सास सँगै बितायौं भने, हाम्रा आमाबाबु र दिदी-बहिनीहरूबाट छुट्टिने मौका आउन सक्छ। पीडा कम होस्।’
यो अनुरोध मोहम्मद सिद्दिकले गरेका हुन्। उनी पाकिस्तानको पञ्जाबको फैसलाबाद जिल्लाको चक २५५ का बासिन्दा हुन्।
त्यो सानो भेट
करतारपुरमा दुई दाजुभाइको भेटका प्रत्यक्षदर्शी नासिर ढिलोनले उनीहरुको भेट निकै भावुक भएको बताए । सो अवसरमा करिब एक सय जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।
मोहम्मद हबिबले आफ्नो जीवनको अन्तिम दिन पाकिस्तानमा बिताउन चाहेको बताएका छन् ।
सबैका आँखामा खुसीका आँसु थिए । केही घण्टाको भेटपछि दुई दाजुभाइ फेरि छुट्टिँदा सबैका आँखा फेरि रसाए ।
धेरै वर्षपछि दुई दाजुभाइबीच पहिलो भेट दुई वर्षअघि भएको थियो । दुई वर्षमा दुई दाजुभाइले एकअर्कालाई भिडियो कल नगरेको दिन बितेको छैन। मोहम्मद सिद्दिकलाई मोबाइल फोन कसरी चलाउने भन्ने थाहा छैन, तर उनका छोराछोरी र गाउँलेहरूले उनलाई यस विषयमा मद्दत गर्छन्।
त्यस्तै मोहम्मद हबिबले पनि मोबाइल फोन चलाउँदैनन्। तर, उनका सिख साथीहरूले उनलाई मद्दत गर्छन्। मोहम्मद हबीब एक सिख परिवारसँग बस्छन्।
मोहम्मद सिद्दिकलाई भेट्न उहाँको गाउँ चक २५५ पुग्दा उहाँ आफ्नो भाइ मोहम्मद हबिबसँग जुममा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मोहम्मद सिद्दिकले आफ्नो भाइ मोहम्मद हबिबलाई भन्दै थिए, "तिम्रो नातिनातिना, नातिनातिना र नातिनातिनीहरूले तिमीलाई याद गर्छन्। तिमीले बिहे गरेनौ, पाकिस्तान आऊ, म तिम्रो बिहे गर्छु।
मोहम्मद हबीबले आफ्ना भाइ मोहम्मद सिद्दिकलाई भनेका थिए, ‘इमरान खानलाई मलाई भिसा नदिन भन। मेरो भारतमा कोही छैन। यो उमेरमा म धेरै एक्लो भएको छु । यति एक्लोपनमा अब जीवन बित्दैन।
दुई दाजुभाइ कसरी छुट्टिए ?
मोहम्मद सिद्दिकले आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएको कथा राम्ररी सम्झन्छिन्। त्यतिबेला उनको उमेर १० देखि १२ वर्षको थियो । जबकि मोहम्मद हबिबलाई आफ्नो आमा, बुबा, दाजुभाइको नाम र अहिले आफू बसेको क्षेत्रका मानिसहरूबाट सुनेका कुरा बाहेक केही याद छैन। त्यतिबेला उहाँ करिब डेढ वर्षको हुनुहुन्थ्यो ।
मोहम्मद सिद्दिक बताउँछन् कि हाम्रो गाउँ जगरावान जालन्धरमा थियो।
उनी भन्छन्, ‘मेरो बुबा जमिन्दार हुनुहुन्थ्यो। मलाई याद छ हाम्रो खेतमा धेरै खरबुजा हुन्थ्यो। मलाई मेरी आमा पनि याद छ।’
उनलाई सम्झना छ कि उनकी आमा आफ्नो कान्छो भाइ मोहम्मद हबीबसँग फूलवालामा मामाघर गएका थिए। आज पनि त्यो गाउँको नाम फुलवाला नै छ र यो भारतको भटिंडा जिल्लामा पर्छ।
उनी भन्छन्, ‘उनी आफ्नो मामाघर गएपछि हाम्रो गाउँमा हमला भयो। मानिसहरू आतंकित भएर इलाका छाडेर हिँडिरहेका थिए। सबैजना पाकिस्तान जाँदै थिए। सबैले आफ्नो ज्यान बचाउन खोजिरहेका थिए।’
मलाई याद छ म मेरो बुबा र बहिनीसँग थिएँ। दंगामा मेरो बुबाको मृत्यु कसरी भयो मलाई थाहा छैन। हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी कुनै न कुनै तरिकाले फैसलाबादको शरणार्थी शिविरमा पुगेका थियौं।’
मोहम्मद सिद्दिक भन्छन्, ‘मेरी बहिनी बिरामी भइन् र फैसलाबादको शरणार्थी शिविरमा मरे। ती दिनहरूमा, मलाई खोज्दै मेरो बुबा फैसलााबादको शरणार्थी शिविरमा कसरी पुग्नुभयो मलाई थाहा छैन।’
मोहम्मद हबिब भन्छन्, ‘यो गाउँ र क्षेत्रमा मेरो कोही छैन । त्यहाँका मानिसहरूले मलाई दंगा सुरु हुँदा मेरी आमा र म मामाघरमा थुनिएका थिए। यसैबीच, विभाजन पूरा भयो। जब पाकिस्तान र भारत बन्यो, बुबा र दिदीबहिनी सबैको हत्या भएको खबर आएको थियो, भाइको बारेमा केही थाहा छैन।’
‘मेरी आमाले यो आघात सहन सक्नुभएन। सुरुमा उनले मानसिक सन्तुलन गुमाए र त्यसपछि उनले संसार छोडिन्। उनका मामा आफन्त पनि पाकिस्तान गए।’
उनले भने, ‘मैले बाल्यकालदेखि सरदार साथीहरू मात्र देखेको छु। म उनीहरूसँगै बसेको छु र उनीहरूसँगै हुर्केको छु।’
मोहम्मद सिद्दिक भन्छन्, ‘विभाजनपछि आएका काफिले केही जानकारी दिने गर्थे । ‘आमाको पनि निधन भएको खबर पाइन्थ्यो । तर मेरो आमाको मातृवंश पनि पाकिस्तानमा विस्थापित भएकोले कुनै बलियो सम्बन्ध थिएन।’
उनले मोहम्मद हबिबको बारेमा धेरै बताउन सकेनन्।
मोहम्मद सिद्दिक भन्छन्, ‘हाम्रो पालामा परिचयपत्र बनाइएको थिएन, तर म पाकिस्तानको उमेरभन्दा १०-१२ वर्ष जेठो छु। जीवनका धेरै महिना र वर्ष भाइको सम्झनामा बित्यो। आमाको मृत्युमा विश्वास गरेर गएको थियो। देखेको थिएँ। दिदीबहिनी र बुवाको शव। तर जीवनभर मेरो भाइ जिउँदै छ भन्ने पक्का भइसकेको थियो।’
विगतको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘मेरा आमाबुवा पाकिस्तानमा काका हुनुहुन्थ्यो। हामी फैसलाबादका विभिन्न क्षेत्रमा बस्थ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई चक २५५ मा जग्गा दिइएको थियो, त्यसपछि हामी यो गाउँमा आएका हौँ।’
‘मैले पनि काका भाइसँग बिहे गरेँ। मैले मेरो सारा जीवन खेतीपाती र जग्गाधनीमा बिताएँ’
मोहम्मद हबीब आफ्नो बाल्यकाल र विगतको बारेमा धेरै कुरा गर्न तयार थिएनन्। उनी भन्छन्, ‘अभिभावक नभएको बच्चालाई के हुन्थ्यो र के हुन्थ्यो। आमाले मलाई छाडेर मर्नु भएको गाउँमा भर्खरै जीवन बिताए।’
मोहम्मद हबिबले किन बिहे गरेनन्, किन बस्नु भएन भन्ने कुरा पनि बोल्दैनन्, उनी यति मात्र भन्छन्, ‘मेरो सरदार साथी र फूलवाला मान्छे नै मेरो सबथोक हुन्, उनीहरूले मलाई मेरो भाइसँग परिचय गराए।’
मोहम्मद सिद्दिक आफ्नो भाइ मोहम्मद हबीबसँग जुममा कुरा गर्दै।
कसरी भयो सम्पर्क ?
मोहम्मद सिद्दिक भन्छन् कि उनका भाइको सम्झनाले उनलाई धेरै सताएको थियो।
उनी भन्छन्, "मेरो मनले सधैं भाइ जिउँदै छ भनी भन्थ्यो। उहाँलाई भेट्ने धेरै रहर थियो। म पिर र फकिरहरूकहाँ पनि गएँ। सबैले प्रयास गर्यौ भने भाइ भेटिन्छन्।"
उनी भन्छन्, ‘पूरै गाउँलाई मेरो कथा थाहा छ। मैले मेरो कथा मेरो नम्बरदार र अहिले नम्बरदारका छोरा मोहम्मद इशराकलाई सुनाएँ। आजभन्दा करिब दुई वर्षअघि मोहम्मद इशराक नासिर ढिल्लनसँग मसँग आएका थिए। उनले मलाई सबै कुरा सोधे। गर, रेकर्ड गरे। क्यामेरामा र मेरो फिल्म खेल्यो।’
‘छायांकनको केही दिन पछि, उनी र मोहम्मद इशराक फेरि आए। उनीहरूले मेरो भाइ फेला पारेको बताए। उनले मेरो भाइलाई पनि कुरा गर्न लगाए।’
चक २५५ का नम्बरदार मोहम्मद इशराक मेरो साथी भएको नासिर ढिल्लन बताउँछन् । ‘मेरो साथी लवली सिंह र मैले उपमहाद्वीपको विभाजनका बेला छुट्टिएका मानिसहरूलाई पुनर्मिलन गर्न पञ्जाबी लेहर च्यानल बनाएका छौं। हामी आफ्ना प्रियजनहरूबाट अलग भएका मानिसहरूका कथाहरू सुनाउँछौं। हामी तिनीहरूलाई पुनर्मिलन गर्ने प्रयास गर्छौं।’
उनले भने, ‘जब मोहम्मद सिद्दिकको कथा युट्युबमार्फत सुनाइयो, त्यो भिडियो फूलवालाका डा जगफिर सिंहले हेरेका थिए। उनले हामीलाई सोशल मिडियामा सम्पर्क गरे, त्यसपछि हामीले उहाँसँग फोनमा कुरा गर्‍यौं। डाक्टर जगफिर सिंहले हामीलाई मोहम्मदको नाम भने। सिद्दिक बताउँछन् ।’
डा जगफिर सिंह भन्छन् कि हामी सबैले मोहम्मद हबिब वा हबिब खानलाई शिकाको नामले चिन्छौं। ‘उनको वास्तविक नाम सायद सम्पूर्ण क्षेत्रका थोरैलाई थाहा छ। म ती मध्ये एक हुँ। मैले शिकाको कथा मेरा ठूलाहरूबाट सुनेको थिएँ जबकि शिकाले मलाई धेरै पटक उनको कथा सुनाइसकेका थिए।’
शिकाले आफ्नो दाजुलाई कुनै न कुनै रूपमा भेट्न सकोस् भनी कामना गरिन् । ‘तर कुनै तस्विर छैन, थाहा छैन यो कसरी सम्भव हुन्थ्यो। यो असम्भवलाई दुई वर्षअघि पञ्जाबी लेहर नामक युट्युब च्यानलले सम्भव बनाएको थियो।’
मोहम्मद हबिब भारतमा बस्दै आएका छन्।
पछिल्ला दुई वर्षमा के भयो ?
मोहम्मद सिद्दिक भन्छन्, ‘नासिर ढिल्लन र नम्बरदार मोहम्मद इशरकले दुई वर्षअघि मलाई मोहम्मद हबीबसँग भिडियो कलमार्फत कुरा गराएको थियो । "जब कुराकानी सुरु भयो, मैले पहिलो कुरा आमा र बुवाको नाम सोधें। उहाँहरूले ठीक भन्नुभयो। मैले मेरो नाम सोध्दा त्यो पनि सही थियो।’
‘उनले आफ्नो र आफ्नो परिवारको बारेमा क्षेत्रका मानिसहरूबाट सुनेका कुराहरू पनि भने, जुन सत्य थियो।’
उनले भने, ‘हबिबले आफू पाकिस्तान आउन चाहन्थे र यदि पाकिस्तान आउन नसके म उनलाई भेट्न भारत जान्छु तर त्यहाँ धेरै अवरोधहरू थिए।’
मोहम्मद इशरक भन्छन्, ‘त्यसपछि मोहम्मद सिद्दिकको परिचयपत्र र राहदानी बनाइयो।’
जगफिर सिंह भन्छन् कि शिकासँग कुनै रासन कार्ड आदि थिएन। म, नासिर ढिल्लन र मोहम्मद इशराकबीच भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षबाट भिसा लिन प्रयास गर्ने सहमति भएको थियो। तर दुर्भाग्य बिचमा कोरोना आएकाले यो सम्भव हुन सकेन ।
कसरी भयो भेट ?
नासिर ढिल्लन भन्छन्, ‘त्यसबेला करतारपुर करिडोर खुलेको छ भन्ने चर्चा भयो, त्यसपछि हामी यो रुटबाटै बिछोडिएका दाजुभाइलाई मिलाउन खोज्छौं । कम्तिमा उनीहरुको बैठक हुनुपर्छ ।’
करतारपुरमा मोहम्मद सिद्दिक र मोहम्मद हबीबको भेट।
जगफिर सिंह भन्छन् कि जब करतारपुर करिडोर खुल्यो, हामीले दरबार साहिबमा पूजा गर्ने कार्यक्रम बनाएका थियौं। ‘दुवै काम सँगै होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। छुटेकाले पनि भेटेर नतमस्तक हुनुपर्छ।’
‘हामीले बुकिङ गरिसकेका छौं भन्नुभयो । यसमा कुनै समस्या थिएन। दुवै पक्षका सरकार र प्रशासनले हामीलाई साथ दिए। त्यसपछि जनवरी १० मा जब हामी करतारपुर पुग्यौं, मोहम्मद सिद्दिक आफ्नो परिवार र सम्पूर्ण गाउँसँगै त्यहाँ उपस्थित थिए।’
मोहम्मद सिद्दिकले भने, ‘मैले मेरो भाइको लागि उपहारस्वरूप कपडा लिएको थिएँ। उसले हामी सबैका लागि कपडा पनि ल्याएको थियो। म चाहन्छु कि उहाँ पाकिस्तान आउनुभएको होस्। जब मैले उहाँलाई पाकिस्तान आउन आग्रह गरे, उहाँले मेरो काँधमा टाउको राख्नुभयो, रोइरहे र आफ्नो सहमति व्यक्त गरे।’
‘हामी दुवै बसेर रोयौं। आमाबुवालाई सम्झेर। दरबार साहिबमा भेटेका थियौं। यस अवसरमा आमाबुवा र अन्य आफन्तहरूका लागि पनि प्रार्थना गरेका थियौं। दिन कस्तो बित्यो थाहा भएन। के भयो?’
मोहम्मद हबिब भन्छन्, ‘फुलवालामा मानिसहरूले मेरो हेरचाह गर्छन्। तर अहिले (पाकिस्तानमा) मन नातिनातिनी, नातिनी, नातिनातिना, कैदीहरूसँग खेलेर केही समय बिताउन चाहन्छ। म मरेपछि मेरो अन्त्येष्टि आफै गर।’
‘मेरो बुढो मान्छेलाई के समस्या होला। दुई पटकको रोटीले सिद्दिकी दिन्छ। मलाई भिसा दिनुहोस्, नत्र दुखको जीवनमा मेरो मृत्यु पनि दुखी होस्।’